I-DECK YELITYE LENDALO (IINTLOBO KUNYE NEEYILO) - AMACHIBI OKUDADA
Eyona amachibi Okudada I-Deck yeLitye leNdalo (Iintlobo kunye neeYilo)
I-Deck yeLitye leNdalo (Iintlobo kunye neeYilo)
Wamkelekile kwimibono yethu yoyilo lwamatye endalo kubandakanya umbala, iindleko kunye neentlobo ezithandwayo ezinje ngelitye lekalika, itravertine, ilitye leflegi, imarble, ilitye leqokobhe kunye nelitye lentlabathi. Ungayigqibezela inkangeleko yoyilo lwakho lokuqubha ngokusebenzisa iphuli yamachibi endalo. Nokuba ubukhuphela ubuhle bendalo, okanye ujonge umxholo ococekileyo wanamhlanje wedama lakho lokuqubha, ilitye lezendalo zezona zinto zixhaphakileyo ezikhoyo.
Zininzi iindidi zemathiriyeli yendalo yamachibi ezinto onokukhetha kuzo. Amanye amatye athandwa kakhulu lilitye lekalika, ilitye leflegi, imarble kunye ne-travertine. Apha ngezantsi siza kuthatha inkangeleko ethe kratya kwiindidi zamachibi edama lokukunceda ufumane eyona ilinganayo nemfuno kunye neemfuno zakho.
Iindidi zeChibi lokuHanjiswa kwamatye
I-Deck Pool Deck-eyiKlasikhi kwaye ipholile
Iflegi yedama lePhuli yamatye-eyahlukileyo kwaye ihlala ixesha elide
I-Deck Pool Deck - ipholile kwaye iyabukeka
UkuHanjiswa kweTrafti ejikeleze iPhuli- kukhululekile kwaye kukhuselekile
Idesika yePhuli yeSandstone-engatyibilikiyo kwaye ilukhuni
Ikhonkco yePhuli yamatye eShell-iToni engathath'icala kunye neSlip-Resistant
Ixabiso leDikki leDama leDama
Elona Tye leNdalo liLungileyo lePhuli yePhuli
Sibeke ndawonye ezona ntlobo zintle zamachibi okuchwetheza ngamatye kunye neempawu zawo ukukunceda ukuba wenze ukubukeka okumnandi okoko uhlala ukufuna kwi-oasis yakho yobuqu. Ezinye zeentlobo ezaziwa kakhulu lilitye lekalika, ilitye leflegi, imarble, itravertine, ilitye lesanti kunye nelitye leqokobhe
Ilitye lekalika linika inkangeleko yeklasikhi kwindawo yakho yokubhukuda kwaye ayitshisi nokuba selangeni ngqo. Kwaye, zizinto eziqinileyo ezinokumelana namaqondo obushushu aguqukayo kakuhle.
Ukutyhubela iminyaka, imbonakalo yeklasikhi yelitye lekalika ibonakaliswe kakuhle, ukusuka kwizakhiwo zakudala kude kube ziimpawu zanamhlanje.
Iphuli yelitye lekalika ijikeleze inika imbonakalo efudumeleyo nenomhlaba enokunqunyulwa ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu. Ke ngoko iyenza ibe yinto efanelekileyo yamachibi amiliswe ngokungaqhelekanga. Unokufumana imibala enje ngwevu, luhlaza okwesibhakabhaka, umbala omnyama, omdaka, pinki, kunye nezinye izinto ezininzi ezahlukeneyo kwaye uya kubonisa umbala oqinileyo ngakumbi, ngokungafaniyo nezinye iithayile zamatye ezinje nge-travertine okanye i-marble.
Kuyacetyiswa ukuba utywine ipakethe yedreyini yelitye lekalika ukuyikhusela kwiminyango nakwimozulu, kwaye oku kuyakufuna ukuba uphinde uyibuyise ngamanye amaxesha. I-limestone kulula ukuyigcina njengoko umphezulu uhlala ungenazo iipockmark, okwenza kube lula ukutshayela kunye nokukopa indawo.
Kukho iimbono ezixubeneyo kwilitye lekalika xa kufikwa kuzinzo, iporosity, kunye neendleko. Qaphela ukuba zonke ezi zinto zinokwahluka kumthengisi ngamnye.
I-limestone ayomelele njenge-bluestone pavers okanye i-granite pavers kodwa yomelele kune-travertine yakho yesiqhelo okanye ilitye lesanti. I-limestone yePremiyamu inamandla aphezulu kwaye isiliphu kunye netyuwa kuvavanywa kwaye yaqinisekisa ukuba zilungele amadama amanzi anetyuwa kodwa azikhuthazwa ukuba zihanjiswe.
Umbala: Uluhlu ukusuka ekukhanyeni ukuya kukhilimu kunye nomdaka ukuya kumnyama Bendlela: Kukho iipavumente zelitye lekalika ezixineneyo kangangokuba ukutywinwa okunzulu kuyafuneka.
Ixabiso: Iipavumente zelitye lekalika zinokuxabisa ukusuka kwi-65 yeedola kwimitha nganye nganye ukuya kwi-230 yeedola kwimitha nganye Ukugcinwa koxinano kwibhetshi kunye nokusikwa kunye nokukhethwa kombala kunokuba nefuthe kwiindleko zepavile yelitye lekalika. Ukunyuka kwamaxabiso kunokubangelwa luhlobo lwelitye lekalika olisebenzisayo, njengoko kukho iintlobo ezinqabileyo zelitye lekalika.
Izinto zeFlagstone kwidesika yakho yeephuli inikezela ngeendlela ezingapheliyo zokwenza ngokwezifiso ipakethe yakho yokuqubha kwaye ixinene kakhulu, iyenza ukuba ibe yinto enzima kwindawo yakho yokubhukuda.
Ungaluchaza ngokulula uphawu lwelitye leflegi kunye nezinto eziqhelekileyo ezingaqhelekanga iimilo echibini kodwa inokunqunyulwa kwisilayidi esinexande okanye esimile okwere isikwere okanye ithayile.
Zihlala zi-intshi ezi-1 ukuya kwezi-3 ubukhulu kwaye zinomphezulu ojijekileyo onika ukubambeka okuhle. Nangona kunjalo, kungcono ujonge ikontraka yakho kwislip ukumelana kwayo njengoko kukho iintlobo zeeflegi ezinokutyibilika xa zimanzi.
Eyona nto yenziwe kwilitye le-sedimentary, ilitye leflegi liyenza ibe yindawo ehlala ixesha elide kwindawo yakho yokubhukuda. Xa kuthelekiswa nelitye lekalika, i-travertine, kunye nelitye lentlabathi, iflegi yelitye ayenzi lula. Ngapha koko, ayinabisi okanye ikhontrakthi phantsi kwamaqondo obushushu aguqukayo ayenza ibe yinto ezinzileyo yokuhombisa iphuli yakho.
Umbala: Umbala uxhomekeke apho iflegi yeflegi ifunyenwe khona.
Bendlela: Iphuli yokubhukuda eneklorine inokwenza umonakalo omkhulu kumphezulu wexesha.
Iindleko I-Flagstone ixabisa i- $ 15 ukuya kwi-22 ngeenyawo zenyawo kwaye ingaba nzima kakhulu kubasebenzi ngenxa yesisindo sayo esinokufikelela kwiiplani ezili-12 ukuya kuma-20 ngeenyawo zenyawo.
Ngokwesiqhelo isetyenziselwa ukutyibilika ngaphakathi, imarble nayo inokuba yinto efanelekileyo yokwenza iphuli kuwe, ngakumbi, ukuba ufuna umgangatho ophucukileyo notshintshayo ongabonwayo nakweyiphi na into enamatye.
Yiyeke ingakhanyiswanga kwaye, uyakufumana iphuli yedesika ekhangeleka intofontofo enganyangekiyo. I-sandblasting marble yakho sisiphelo esigqibeleleyo apho ii-indentation ezincinci kunye neebumps zenziwe khona ukuze zenze ukuba zibukeke zindala kwaye zibukeke zindala, yiyo loo nto ke, kudaleke ukuhanjiswa okuhle kwephuli yakho.
Impahla yeMarble isetyenziswa ngesiqhelo ukuba unendawo enkulu yokuhombisa iphedi yakho njengoko inokuqhuba ubushushu ngokukhawuleza. Ukuba kude nelanga elithe ngqo kunokuba yinto epholileyo yokubeka umgangatho kwiinyanga ezishushu zasehlotyeni.
Ungayicoca ngokulula ifayile yakho Umgangatho wamachibi emabhile ngesepha ethambileyo kunye namanzi kwaye ususe ulwelo olchithekileyo, nangona kungcono ukususa ezinye izinto ezinamanzi ane-asidi ngokukhawuleza ukuthintela ukungcoliswa.
Umbala: Uluhlu olubanzi lwemibala ukusuka, mhlophe, mnyama, beige, browns kwaye luhlaza zezona zixhaphakileyo. Uya kufumana i-graining eqhelekileyo kunye nombala ofana neCarrara emhlophe, ngwevu yePacific kunye nezinye ezininzi.
Bendlela: Ngaba ukufudumeza ngokukhawuleza phantsi kwelanga ngqo.
Ixabiso: I-Marble ingahluka ukusuka kwi-8 ukuya kwi-45 yeenyawo nganye kwinqanaba le-square apho i-premium okanye i-marble ekhethekileyo ingabiza i- $ 45 ngeenyawo zenyawo.
I-travertine decking iziva intofontofo phantsi kweenyawo zakho njengoko ibukeka, iyenza ukuba ibe yinto efanelekileyo kwidama lakho lokuqubha elingqonge. Ngomphezulu wayo ongena ngaphakathi, ubamba amanzi anokufaka isandla ekutyibilikeni kwamanzi. Unokukhetha ukugqitywa kokuwa ukongeza ukubambeka kwindawo yakho yokuhamba emanzini.
Enye yamandla e-travertine kukuba ihlala ipholile phantsi kwelanga njengoko ibonakalisa ubushushu emhlabeni wakho. Oku kwenza ukuba kube lula ukusebenzisa iphuli yakho nokuba kusemini. Iithayile zethrafikhi kunye neepavila zihlala zizinzile kwaye ziyamelana nemijikelezo yomkhenkce.
Iidrafti zamachibi e-travertine zilungile njengoko ubona ukwakheka kwendalo kweenkozo, imithambo, iifissures, kunye neepateni ezahlukeneyo ngokwendalo ezifumaneka ematyeni. Ngapha koko, unokukhetha okwaneleyo kwimibala kunye noyilo lokwenza iphedi yokujonga enomtsalane.
I-limestone efana ne-travertine nayo yenziwe kwilitye le-sedimentary eneepatheni ezizodwa kunye nokwakheka. Nangona kunjalo, ngokungafani nelitye lekalika, ineyantlukwano kunye neepateni.
Umbala: Ngokuyintloko inemibala efudumeleyo efana nomhlophe, ukhilimu, beige, igolide, umdaka, kunye nobomvu.
Bendlela: Ngenxa yobuninzi bayo, kuyacetyiswa ukuba uyitywine impahla yakho yephuli yethrafikhi, ngakumbi xa ukufuphi nomhlaba, njengoko unokuhamba ngaphezulu komhlaba.
Ixabiso: I-travertine pool decks ibiza malunga ne-13 ukuya kwi-16 yeedola ngeenyawo ukufaka kwaye iya kuxhomekeka kwizinto ezininzi, ngakumbi ngakumbi apho ifunyenwe khona njengoko ingeniswa ngaphakathi kodwa ifumaneka ngokulula.
Kuba yenziwe ngesanti kunye ne-quartz amasuntswana, ilitye lesanti yenye yezona zinto zinxibe nzima kakhulu kumgangatho wephuli yakho.
I-hardscape ifunxa isixa esincinci samanzi kumphezulu wayo esinciphisa ukutyibilika kunye nokukhula kwe-algae kwidesika yedama lakho. Amatye esanti akumgangatho ophezulu aya kuba nesiliphu esixhathisayo se-P5 okanye i-R11.
Inqaku elichongiweyo lomhlaba oyisanti kukuba inefuthe lokupeyinta ngebrashi elinentwana yeenkozo kunye nemithambo kwaye iyonwabele ukugqiba. Imibala isusela ikakhulu kwimibala ekhanyayo ukuya kwi-beige kwaye unokukhetha iithoni ezimnyama ukuba ufuna ulondolozo oluncinci kumgangatho wakho weplanga.
Ilitye lentlabathi ngokuxhathisa ngokwendalo kukungxwelerha kunye nokonakala kwetyuwa kodwa kuxhomekeke kumgangatho welitye lentlabathi lakho, amatye asezantsi ukuya kwinqanaba eliphakathi aya kufuna ukuveliswa ngokutsha kunye nolondolozo.
Umbala: Beige kwimibala emdaka ekhanyayo.
free ukuthandana apps kubantu abatshatileyo
Bendlela: Ngaba inokuwohloka ngokuhamba kwexesha ngenxa yomxholo wetyuwa emanzini, kungcono ufumane isitywina esifanelekileyo sokusisebenzisa.
Ixabiso: Ukuhonjiswa kwephuli yelitye lentlabathi kungabiza malunga ne- $ 11 ukuya kwi-30 yeedola ngenyawo nganye ukuyifaka.
Ikhonkco yePhuli yamatye eShell-iToni engathathi cala kunye neSlip-Resistant
Ngeso sibheno sipholileyo saselunxwemeni, ilitye leqokobhe yinto yakho efanelekileyo yokuhombisa iphuli. Kuyanyinyitheka kukwenza kube kuhle hayi kuphela imiphezulu ethe tyaba kodwa kunokusetyenziselwa amanyathelo kumgangatho wedama lakho lokubhukuda.
Njenge-limestone kunye ne-travertine, ilitye leqokobhe elenza ilitye lentlenga umahluko ngamaqhekeza ahlukileyo oonokrwece kunye neekorale enza iipateni ezizodwa. Ikwabizwa ngokuba lilitye lekorale, ilitye leqokobhe lomelezwa yimo yalo yendalo iyenza yomelele kakhulu nangaphantsi kwamaqondo obushushu kunye nemozulu.
Ngaphandle komboniso owahlukileyo wamatye eqokobhe afakwe kumphezulu wamatye, uya kuzithanda ii-hues ezipholileyo ezingathathi hlangothi kwindawo yakho yokuhombisa. Kwaye alibonwanga lipholile kuphela ilitye leqokobhe kodwa liziva lipholile kamnandi phantsi kweenyawo zakho. Oku kwenza ukuba i-hardscape ifaneleke, nokuba uyonwabele iphuli phantsi kwelanga.
Esinye isizathu sokuthanda ithoni yegobolondo kukuba ayiyi kubonisa ukungcola ngokulula, ukuthintela abanini ekucoceni ngokwenkolo. Nangona kunjalo, kungcono ukuba uthule rhoqo kwaye usule ilitye leqokobhe lakho ukuze ugcine indawo yakho yokuhombisa inyibilikisiwe kwaye ujonge uphawu olutsha ngalo lonke ixesha.
Umbala: Ukhetho oluthandwayo ngabantu abamhlophe abamhlophe, ama-beige, kunye ne-pink undertones kodwa unokufumana iitoni ezifudumeleyo ezinjenge-walnut, okanye ii-brown hues.
Bendlela: Njengamanye ama-hardscapes amatye, kuya kufuneka utywine iplanga lakho leqokobhe lamatye ukuze unciphise i-porosity.
Ixabiso: Ngokomndilili, ilitye leqokobhe okanye i-coral echibini lokuchwetheza linokubiza malunga ne- $ 15 kunye ne- $ 40 ngenyawo lesikwere ngaphandle kokubandakanya.
Uluhlu lwamatye okwakhiwa kwamachibi ngamatye angaqala ukusuka kwi-5 yeedola kwisikwere ukuya kuthi ga kwiidola ezingama-40 ngenyawo lesikwere.
Eli xabiso liyahluka ngokuxhomekeka kwiindleko ezinje ngendawo, umgangatho wepavile, ubungakanani bechibi Ukucwangciswa komgangatho, ukumba, indawo, kunye nexesha lonyaka oceba ukwenza ulwakhiwo lwedama lakho.
Uninzi lwabanini makhaya bahlawula i-3,000 yeedola njengeyona ndleko iphantsi, ngexabiso eliphakathi le- $ 5,000 kunye ne- $ 12,000 yeendleko eziphezulu kwindawo yokuhombisa ilitye. Ukongezwa okubalulekileyo kwiindleko zakho zokucoca iiphuli ngamaxabiso okumba xa ufuna ukufaka elinye iphuli elingaphakathi, ngentlawulo eyi- $ 500.
Ukuthatha isigqibo sokuba nedike yelitye lendalo sisiteyitimenti esinamandla esibonisa incasa yakho enesimo kunye nenqanaba. Njengoko ingengawo onke amatye endalo enziwa alingane, ukufumana elona litye lilungileyo lendawo yokuhombisa kunokuba nzima. Elinye lelona litye lisetyenziswayo lendalo kwindawo yokuqubha yitravertine.
Umgaqo wesithupha ukubeka phambili ukhuseleko kunye nentuthuzelo. Oku kuthetha ukusebenzisa ilitye elingatyibiliki iphuli yokuqubha Ziyacetyiswa kakhulu. Ezo zingafudumali ngeenyanga ezishushu kwenye inzuzo eyongeziweyo.
Kuyacetyiswa ukuba ube nokulinganisela kwezinye izinto ezinje ngokuzinza, ukubonakala, ukuhlala ixesha elide, indleko kunye nozinzo. Musa ukukhupha amandla okuphelisa ukunamathela kwi-sealant efanelekileyo ngokukodwa kwizinto zamatye ezinqabileyo.
Kuba ukubekwa kwamachibi ngokubanzi phantsi kwelanga kwaye ukuba iphuli yakho inokugubungela indawo ebalulekileyo, kungcono ukhethe iithowuni ezikhanyayo kwilitye lakho lendalo.
Amatye anemibala ekhanyayo anciphisa ukugcinwa kobushushu kunye nokufakwa kwi-hardscape yakho nakwizakhiwo zayo eziyingqongileyo. Ngale ndlela ugcina iphuli kunye nendawo ejikelezileyo ipholile ngelixa unciphisa ubushushu obungafunekiyo kwindalo ngokubanzi.
Ukwazi lonke olu lwazi kuyanceda kwimfuno yakho yelitye lendalo elilelona liphezulu, kodwa eyona ndlela yokwanelisa zonke izinto ozikhethayo kukuqasha ingcali kwilitye lamatye lendalo ukukhulisa ukubanakho kwakho okumangalisayo ngelitye lendalo.
Ukunceda ukwenza eyakho ipuli kukho iintlobo ezininzi ezahlukeneyo ze isoftware yoyilo lwedama . Ezi nkqubo zinokusetyenziselwa ukuyila iphuli kunye nokujonga izinto ezahlukeneyo ukufumana eyona ilungileyo ekhayeni lakho.
Yimalini isihluzo se-snapchat
Uhlangane nini u-barack kunye no-michelle
amalokhwe amfusa kunye negolide
ubhatalela ntoni abazali bomyeni
isipho seminyaka engama-25 sitshatile